PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - NABAZANYANA UYABAPHATHA UMKHUHLANE BELU
NABAZANYANA UYABAPHATHA UMKHUHLANE BELU
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba - THOBILE NXUMALO
INDLELA engiwesaba ngayo umkhuhlane ngiye ngize ngintele ngithi kungcono ngisho ukuqhuzuka unqamuke ubhozo noma ukuphathwa yisibhobo, kumane kucace nje ukuthi uyagula kunokuphathwa wumkhuhlane onzima.
Uyawazi lo mkhuhlane othi uma ukuphethe kube sengathi awusile, kube sengathi namalunga omzimba agencwe ngobhushu omkhulu? Ha, usuke ukubambe kahle ngqi umkhuhlane uma uzwa nekhanda likwesinda kubuye kube sengathi liyas’pina, ube saphuze muthi namaphilisi, uvele ubhocobale kakhulu kunakuqala ufise ukucambalala.
Uvele ube yintithithi sengathi yitshwele kade liphonseke emncindweni. Ngike ngazibuza nje ukuthi kazi abasizi nabazanyana laba esihlala nabo emakwethu siyabazwela yini uma benomkhuhlane okanye zilima ziye phambili.
Sengineminyaka eminti, kangikaze ngizwe muntu othi umsizi noma umzanyana wakwakhe ulele ekameleni ngoba uphethwe wumkhuhlane? Kubo bonke abantu esisondelene nabo abanabasizi nabazanyana emakhaya abo ukhona yini oke umuzwe ethi: “Cha bandla ngithe ake acambalale ngoba ubanjwe wumkhuhlane kabi kulezi zinsuku?”
Lutho, ungalibhadula uliqede izwe nya. Emicabangweni yethu kusengathi yithina kuphela esihlaselwa wukugula. Simemezela kwazi wonke umuntu endlini ukuthi siqalwa wumkhuhlane kepha uma umsizi ethi uyagula sibone sengathi uyazenzisa noma usesukwe wubuvila. Isebenze iqhubeke ingane yabantu ivuke ngo-5 ekuseni ngoba nakhu akunamuntu oshilo ukuthi ingazigqilazi kakhulu kulezi zinsuku ize ibe ngcono. Abaningi bakholwa wukuthi kumele umsizi wasekhaya aze aphathwe yisifo esikhulu njenge-cancer ukuze bamzwele, bamnike ithuba lokunesa impilo.
Kunalezi zinkalakatha zomedemu-ke ezithi zingathimula nje, akasayi emsebenzini, useyabafonela ubatshela ukuthi ubanjwe womubi kabi umkhuhlane lo, umlalise phansi. Akoke kube wumsizi lowo ocela ikhefu lezinsuku ezintathu zokugoduka ukuze ezophumula kahle ekhaya abuye uma sekudamuke umkhuhlane, ungamuzwa kahle umedemu wansondo.
“Manje Thoko ingane ngizoyenzenjani zonke lezi zinsuku ezintathu ungekho?”
Nawe uyalova nje emsebenzini uma ugula, uke akubuze yini umqashi wakho umbuzo onjalo? Empeleni le nto kayehlukile kulabo medemu abafonela umsizi egodukile ekubo befuna ukubuza ukuthi konje sihlalaphi i- sta soft okanye edukelwe yijezi lengane. Kumele umsizi athi ekubo alokhu efonelwa ebuzwa izinishinishi zasemsebenzini ngoba nakhu yena kalimfanele ikhefu?
Abanye babasizi bathi baze beqiwe yizinsuku okumele baye ngazo emtholampilo beyolungisa izindaba zabo zokuhlela umndeni ngoba benqatshelwa okanye besaba ukuthi kuzomele baqale bachaze komedemu ukuthi bayokwenzani emtholampilo nokuthi kuzothiwa makatshathe ingane ahambe nayo ngoba akunamuntu ozosala nayo.
Ngike ngibuke nasezindaweni zokudlela ingane ipiringana ihlupha umzanyana etafuleni, unina ezikhululekele nje exoxa namanye amalunga omndeni.
Kubi ngoba izinto ebesizibona zenziwa kubazali bethu emajalidini nasemakhishini sezenziwa nayithina abampisholo kubasizi bethu.
Mhlawumbe kuyiqiniso ukuthi obecindezelwe uyaye athi angakhululeka enze okufana ngqo nalokhu obekwenziwa ngumcindezeli kuye kodwa enganakile.
Umedemu utelekeshela achushe zonke izindlela zakhe. Weqa amangqamngeshe eya emishadweni yomzala, emingcwabeni yoninalume nasemicimbini yabangani bakhe, okusho ukuthi noma engayile emsebenzini kodwa uzobe engekho ekhaya. Umsizi uma eke wathi kunomcimbi kubo useyinyathele emsileni, uyogqishazela umedemu kuyokwanda umusa.
Olunye lwezindaba ezixoxwa ngabake basebenza emajalidini wubuhlungu bokugada izingane zabanye abantu ube wazi ukuthi ezakho zisele dengwane emuva kanjalo nokuhlanza uphiphe ukungcola kubhazabhaza womuzi womqashi kube kungcole kuxathuka kwakho ngoba kawukho.
Ngeshwa yisimo sokungalingani ngokwamandla omnotho esidala ukuba kube nomuntu ozophoqeleka ukufulathela ikwakhe ayonakekela ikhaya lomunye umuntu kodwa-ke singabenza lobo buhlungu bungazweli kakhulu ngokuba sibaphathe kahle, bathi namhla behamba unomphela babe nenkumbulo yezingane zakho.
Uboke umbuze nje ngezingane zakhe ukuthi zinjani empilweni, ziphasile yini bese umeseka nasempilweni umkhuthaze asondelane nemitholampilo abone naye ukuthi umkhathalele.
Bese niyeka-ke nokuhleba nokubukisa ngabasizi uma ninabangani benu ngoba leyo nto ibulala ukuzethemba kwabo. Kahle-hle phela into ekwenza ube ngcono kunomsizi wakwakho wukuthi wena unemali yena akanayo, ngale kwalokho ningabantu nobabili yikho-ke kumele uzame ukuveza ubuntu.
Awukwazi ukuthi ungaba yipigogo kumuntu owazi izibi zakwakho, aphiphe ukungcola kwakwakho wena usemahhovisi uveteza isingisi uphuza namatiye.
*Uthobile Nxumalo ngumhleli Omkhulu WELANGA. Ungaxhumana naye kuthobile.nxumalo@ilanganews.co.za noma editor@ilanganews.co.za. Ukhona nakufacebook:
Thobile Nxumalo, kwitwitter: @Thobilenxumalo nakwi-instagram: @nxumalo_r_thobile